खानका लागि कुन तेल ठीक ? – Khabaarpati
December 23, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on खानका लागि कुन तेल ठीक ?
उता टेलिभिजनको पर्दामा ‘तोरीको तेलले मुटु बलियो बनाउँछ’ भन्ने खालको विज्ञापन पनि देखिन्छ । बजारमा किन्न जाँदा सूर्यमुखी तेलको सिसीमा ठूलो–ठूलो अक्षरले ‘शतप्रतिशत कोलेस्ट्रोल फ्री’ लेखिएको देखेपछि यो नै स्वास्थ्यवद्र्धक रहेछ भन्ने लाग्छ । यस्तै प्रकारले ओलिभ, मकै, भटमास, नरिवल, बदामलगायतका तेलहरु पनि आकर्षक बोतलमा देख्न पाइन्छ, जसका कारण उपभोक्ताहरु यो किन्ने कि त्यो किन्ने भनी अन्यौलमा पर्छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
फ्याटी एसिडहरु चार प्रकारका हुन्छन्– स्याचुरेटेड, मोनोअनस्याचुरेटेड, पोलिअनस्याचुरेटेड र ट्रान्स । हामीले सुन्दै आएका ओमेगा–३, ओमेगा–६ र ओमेगा–९ यिनै चार प्रकारका फ्याटी एसिडहरुमध्येका हुन् । तेलको प्रकार हेरीकन यी पौष्टिक तत्वहरु पनि कम–बेसी हुन्छन् । उदाहरणका लागि सूर्यमुखी तेलमा पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याट र ओमेगा–६ को मात्रा बढी हुन्छ भने तोरी र ओलिभ तेलमा मोनोअनस्याचुरेटेड फ्याट र ओमेगा–३ को मात्रा बढी हुन्छ । नरिवल तेल र घिउमा स्याचुरेटेड फ्याट बढी पाइन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
ओमेगा–३ र ९ ले शरीरमा राम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउँछ, ट्राइग्लिसेराइड घटाउँछ, रगत जम्ने प्रक्रियामा कमी ल्याउँछ, मुटुको घड्कन नियन्त्रण गर्छ । ओमेगा–६ को थोरै मात्राले मुटु र दिमागमा राम्रो असर गर्छ । डिप्रेसनलगायतका मानसिक समस्या कम गर्छ, स्मरण शक्ति बढाउँछ । यसको मात्रा बढी भएमा मानसिक विकृति, मुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सर, बाथ, पेटरोग आदि धेरै प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । पौष्टिक तत्वका हिसाबले ओलिभ र तोरीको तेलमा ओमेगा–३, ९ र भिटामिन ‘ई’ को मात्रा सूर्यमुखी तेलको तुलनामा बढी छ । सूर्यमुखी तेलमा ओमेगा–६ को मात्रा बढी छ । घिउमा ओमेगा–३, ९, भिटामिन ‘ए’, ‘डी’, ‘ई’ र ‘के’ को मात्रा प्रशस्त छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
यी सबै पक्षहरुलाई विश्लेषण गर्दा, खानेतेल कुन ठीक भन्ने सम्बन्धमा पछिल्लो वैज्ञानिक अवधारणा यसप्रकार रहेको छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
१. सबै वनस्पति तेलमा केही न केही पौष्टिक तत्वहरु हुन्छन् । यसकारण सबै प्रकारका तेलहरु थोरै मात्रामा खाना बनाउँदा (तरकारी पकाउँदा, रोटी पकाउँदा, सलाद बनाउँदा आदि) प्रयोग गर्नुपर्छ । धेरै तापक्रममा पकाउनुपर्ने खाना (मासु, गेडागुडी आदि) पकाउँदा ‘स्मोक प्वाइन्ट’ धेरै भएको तेल जस्तै– तोरी, एभोकाडो, नरिवल आदिमा पकाउँदा राम्रो हुन्छ । सलाद बनाउँदा ओलिभ हाल्नु उत्तम हुन्छ । थोरै तापक्रममा पकाउन ओलिभ ठीक मानिन्छ ।२. तेलको मात्रा दैनिक ३ चम्चा (१५ ग्राम) भन्दा बढी हुनुहुँदैन ।
३. तेललाई धेरैपल्ट तताउँदा ‘फ्री रेडिकल’ र ‘ट्रान्स फ्याट’ जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पदार्थहरु उत्पन्न हुन्छन् । यसकारण खाना पकाउँदा तेललाई जति कम ततायो त्यति हानि कम हुन्छ ।४. प्रशोधितभन्दा शुद्ध तेल स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ ।
५. तोरी र नरिवलको तेलले छाला र कपाललाई पनि फाइदा गर्ने भएकाले शरीरमा दल्न, मालिस गर्न उपयुक्त मानिन्छ ।६. तेल, घिउ ठिक्क मात्रामा र सही तरिकाले खाँदा शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्ने सम्भावना रहँदैन ।७. हामी नेपालीहरुका लागि शुद्ध तोरीको तेल र घिउ खाना पकाउनका लागि सबैभन्दा उत्तम छ । किनकि यिनीहरुमा पौष्टिक तत्वहरु पनि बढी पाइन्छ, स्मोक प्वाइन्ट पनि बढी छ, धेरैपल्ट तताउँदा पनि बिग्रिँदैनन् र हामीलाई यिनीहरुको स्वाद पनि मीठो लाग्छ । तर दैनिक १५ ग्रामभन्दा बढी नखाएकै राम्रो हुन्छ । न्युज अफ नेपाल बाट
भिटामिन डीको कमीले शरीरमा देखिन्छन् यस्ता समस्या, यी संकेतलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता